Animaker: Samee-Is-Naftaada Animation Studio, Tifatiraha Video Suuq geynta, iyo Dhismaha Xayeysiiska Video | Martech Zone
Fiidiyowga firfircoon iyo tooska ah ayaa lagama maarmaan u ah urur kasta. Fiidiyowyadu aad ayey u mashquulsan yihiin, waxay awood u leeyihiin inay si macno leh u sharxaan fikradaha adag isla markaana ay siiyaan khibrad u leh muuqaal iyo maqal labadaba. In kasta oo fiidiyowgu uu yahay mid dhexdhexaad ah oo la yaab leh, haddana inta badan lagama adkaan karo ganacsiyada yaryar ama suuqleyda sababta oo ah ilaha loo baahan yahay:
Qalab fiidiyow iyo qalab maqal ah oo loogu talagalay duubista.
Xirfadlayaasha codka ee qoraalkaaga.
Naqshadeynta xirfadaha iyo animations si loogu daro.
Iyo, laga yaabee, ilaha ugu qaalisan uguna muhiimsan - tafatirka xirfadeed ee saameynta.
Warka ugu weyn ayaa ah inaan sii wadayno inaan aragno horumarka - labadaba qalabka iyo softiweer. Telefoonka casriga ahi wuxuu ku duubi karaa fiidiyoow qurux badan qaraarada 4k ee hodanka ah. Kudar makarafoon la awoodi karo oo codkaaga ayaa dhameystiri doona khibrada muuqaalka. Lakab gudaha, dibedda, muusig, muuqaallo, ama xitaa animations waxaadna yeelan kartaa gabal suuq wax ku ool ah oo aan jabinin bangiga.
Madadaalada Animaker-ka iyo Tifatirka
Animaker's dhise jiido-iyo-dhibic ayaa u sahlaysa qof walba inuu abuuro fiidiyoowyo muuqaal heer sare ah leh iyadoo la adeegsanayo qaabab horay loo sameeyay iyo hanti-diyaarsan oo lagu tago xirfado farsamo eber Barxadda waxaa loo dhisay shakhsiyaad ama kooxo si ay u horumariyaan nooc kasta oo fiidiyoow ah.
Suuqleyda ayaa u adeegsanaya Animaker dulmarka muuqaalka, fiidiyowyada dul-saaran, fiidiyowga sharraxayaasha, fiidiyeyaasha sharraxan ee firfircoon, fiidiyowyada muuqaalka ah, markhaatiyada macaamiisha, bandhigyada ganacsiga, xayeysiisyada fiidiyowga ah, Muqaallada fiidiyowyada ah ee 'Instagram', fiidiyowyada Facebook, iyo fiidiyowyada Youtube iyo xayeysiinta fiidiyowga
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ayaa ah in Animaker uu kuu ogolaanayo inaad ku celiso fiidiyahaaga barnaamijyo kala duwan si fudud. Si fudud u riix batoonka dib u habeynta iskuna beddel noocyada fiidiyowga ee kala duwan isla markiiba.
Waa kuwan qaar ka mid ah astaamaha kale ee cajiibka ah iyo waxqabadka:
Istuudiyaha animation-ka Animaker wuxuu awood kuu siinayaa inaad naqshadeyso oo aad daabacdo fiidiyowgaaga firfircoon oo leh dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah:
Astaamaha Dhisaha - Iyadoo in ka badan 15 muuqaal oo waji ah si loo habeeyo iyo in ka badan 10 boosaska dheellitirka ah, dhis dabeecadda aad rabto oo aad ku shubto fiidiyowyadaada!
Dabeecadaha muujinta wajiga - In kabadan 20 muujinta wajiga, Animaker wuxuu kaa caawinayaa inaad jilayaashaada iyo fiidiyowyada u soo noolaato nolosha.
Dib-u-is-waafajinta Dib-u-hagaajinta otomaatiga ah - Ku dar cod-bixiyeyaasha jilayaashaaga oo daawada iyaga oo leh oraahda otomaatiga ah. Uma baahnid inaad waqti ku qaadatid firfircoonida bushimaha dabeecadda.
Dhaqaaq Smart - Dhaqdhaqaaqayaashu waxay ku dhawaad ​​80% waqtigooda ku qaataan animation walxaha si ay uga guuraan hal meel una wareegaan meel kale. Anaguna waxaan go aansanay inaan waqti iyo dadaalba kuu keydinno. Ku kici animations adag adoo adeegsanaya Smart Move oo gujinaya badhanka.
Abuur animation-kaaga ugu horeeya hada!
Soo rar wareysigaaga, markhaatigaaga, ama fiidiyowga kale ee la duubay iyo Dhaqaaqe waxay bixisaa tan oo astaamo ah sida saamaynta kaamerada, saamaynta shaashada, raadadka maqalka, kala guurka, iyo inbadan oo lagu daro dareen heer sare ah fiidiyahaaga.
Toosinta Fiidiyowga Tooska ah iyo Tayada Fiidiyowga ee 4K - Soo xul, soo rar, oo wax ka beddel fiidiyowyada dhammaantood hal meel. Animaker wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la istaagto fiidiyowyo tayo sare leh oo 4K ah.
Cinwaan Fiidiyowyadaada - Animaker, waxaad si fudud cinwaan uga noqon kartaa fiidiyowyadaada si aad ugu diyaarsato madal kasta.
Ku dar fiidiyowyada adigoo gujinaya - Ku duub fiidiyowyada qoraal, sawirro, istiikiiro, iyo in ka badan.
Calaamadee Mawduucaaga - Si fudud ugu calaamadee astaantaada fiidiyowyadaada iyo GIF-yadaaga oo leh astaan-biyood kuu gaar ah.
Hantida Hantida - In ka badan 100 milyan oo hanti ah oo aad u isticmaasho. Maktabada Animaker sidoo kale waxay kuxirantahay kuwa Getty si ay ugu fududaato helitaanka sawirka ama fiidiyaha ugufiican mashruucaaga!
Muusikada Boqortooyada-Bilaashka ah iyo Saamaynta Dhawaaqa - Sameeyaha wuxuu kugu daboolay xagga hore ee codka in ka badan 100 raad oo muusig ah iyo kumanaan saameyn dhawaaqeed ah maktabaddayada maqalka.
Abuur Fiidiyowgaagii Ugu Horeeyay Hadda!
GIF-ga Animated iyo Short Video Abuuraha
GIF-yada Animated-ka ayaa u fiican warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta iimaylka library Maktabadda Animaker sidoo kale waxaa lagu dhejiyay Giphy si ay ugu fududaato helitaanka GIF ugu habboon ee mashruucaaga!
Abuur GIF-gaaga Animated-ka ah hadda!
Wadashaqeynta iyo Maareynta Sumadda
Ku martiqaad saaxiibbadaada dusha sare inay ka wada shaqeeyaan dhammaystirka fiidiyowyadaada. Animaker wuxuu kaloo bixiyaa xirmo sumadeed si loo hubiyo in sharafta sumcaddaada loo hayo si joogto ah dhammaan fiidiyowyada aad daabaceyso.
Kalandarka Suuqgeynta Fiidiyowga
Isticmaalayaasha hadda waxay helayaan kalandarka suuqgeynta fiidiyowga oo ay ka buuxaan fikrado fiidiyoow ah oo kaa caawinaya inaad qorsheyso oo aad u sameyso fiidiyowyo dhammaan maalmaha gaarka ah sannadka oo dhan. Si fudud ugulaab qaybta qaybta bisha hadda jirta cinwaankeedu yahay waxaadna heli doontaa tanno ah fikrado fiidiyoow ah oo la caddeeyey oo lagu xoojinayo joogitaankaaga warbaahinta bulshada.
Barxadda xitaa waxay ku darsameysaa sirdoonka codka-ka-badan si loo habeeyo loona soo saaro qoraalkaaga iyadoon loo baahnayn shaqaaleyn karti. Codka Animaker-ka ayaa awood kuu siinaya inaad:
Bini-aadamka u eg Voice over - Si fudud ugu beddel qoraalkaaga ama qoraalkaaga tayada ugu sarreysa ee u eg bini-aadamka u eg.
Xakamaynta Codka Sare - Ku dar midab, hakin, ama xoojinta erey kasta oo la xushay. Xitaa waad sameyn kartaa codka si hooseeya ama neefsato.
Ikhtiyaarrada Codka Luuqadaha Badan - U sameyso cod-ka-fidiyowyadaada 50+ cod iyo 25 luqadood oo kala duwan.
Abuur Cod-bixin Hadda
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Dhaqaaqe oo ay leeyihiin xiriiriyaashooda maqaalkan.
Tags: aiai cod-dhaafai codkaanimatefirfircoonaanta gifanimationistuudiyaha ciyaarahajiididda iyo dhibicdibeddacabir videoanimation kaydkasaamiga videoiskaashiga fiidiyowgaficil videojadwalka suuqgeynta fiidiyowgadaabacaadda fiidiyowgaistuudiyaha fiidiyowgatusaalooyinka fiidiyowgacodkacod kor